विनयजंग र पवित्रा लामा विरु,द्ध गृहमन्त्री समक्ष सपनाले दिएको उजुरी यस्तो छ, प्रहरीले खोजी थाल्यो विनयजंग फरार – Ujyaalo Patrika
विनयजंग र पवित्रा लामा विरु,द्ध गृहमन्त्री समक्ष सपनाले दिएको उजुरी यस्तो छ, प्रहरीले खोजी थाल्यो विनयजंग फरार
काठमाडौ । सामाजिक सञ्जाल युट्युवमा अनेक टिप्पणी गर्दै चेतावनी दिएका विनयजंग बस्नेत वि,रु,द्ध सपना रोका मगरले उजुरी दिएपछि प्रहरीले विनयजंगको खोजी थालेको छ । उनी फरार रहेको बताइएको छ । बीबीसीले विश्वका एक सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा सपनालाई राखेपछि विनयजंगसंग सपनाको विवाद सुरु भएको थियो ।
सपनाले छुट्टै संस्था दर्ता गरेर सामाजिक काम गर्न थालेपछि यो वि’वाद अझ बढेको बुझ्न सकिन्छ । सपनालाई अनेक लाच्छना लगाउँदै विनयले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै आएका थिए । सपना रोका मगरले उनीहरु,द्ध जाहेरी दिएपछि प्रहरीले प, क्राउ गर्न खोजी सुरु गरेको हो । प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंहले उजुरु दर्ता भएपछि प, क्राउ पुर्जीका लागि अदालतमा पुगेको बताए । पुर्जी जारी भएपनि बस्नेतलाई प, क्राउ गरिने उनले जानकारी दिए।
सपनाले बस्नेतवि, रूद्ध अ’भद्र व्य’वहा’र’को मुद्दा जाहेरी दिएकी हुन् । उनका अनुसार बस्नेत अहिले काठमाडौं बाहिर छन्। प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ। यसअघि सपना र बस्नेतले मिलेर बेवारिसे शव ज’ला’उने काम थालेका थिए।
यस अघि सपना र उनका बुवा आमाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पनि भेटेर उजुरी त्यसवारे जानकारी दिएका थिए । गृहमन्त्रीलाई दिएको निवेदनमा पनि सोही कुरा उल्लेख छ । उनले आफुलाई विनयजंग र उनका सहकर्मी पवित्रा लामा वि,रु,द्ध पनि उजुरी दिएकी छन् ।
Previous के हो भ्यालेनटाईन डे ? किन मनाइन्छ ? ‘भ्यालेन्टाइन डे’ सँग जोडिएका केही रोचक तथ्यहरु
Next ‘आफ्नै बुढीको गो’प्य अं’गको फोटो पराई पुरुषको मोबाइलमा भेतिएपछी . . . थुप्रै प्रमाण (भिडियो सहित)